गल्कोट नपामा बामपन्थी उपमेयरहरु यस्ता छन् ! – ebaglung.com
गल्कोट नपामा बामपन्थी उपमेयरहरु यस्ता छन् !
२०७४ बैशाख ९, शनिबार १०:०८	थप समाचार
बालकृष्ण सुबेदी , गल्कोट २०७४ बैशाख ९ गते । स्थानिय तहको निर्वाचनमा मेयर र उपमेयर तथा गाउँ प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य सहभागी हुने ब्यवस्था संगै महिला उमेद्वार दलहरुले छानि सकेका छन् ।
स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा नेपाली काग्रेसले मेयर अथवा उपमेयरमा महिला उमेद्वार छनौट गरेको छैन् । तर गलकोटमा क्रियासिल बाम शक्तिहरुले उपमेयरहरुमा महिला अगाडी सारेका छन् । नेकपा एमालेले नरेठाँटीका रत्ना भण्डारीलाई उपमेयरमा अगाडी सारेको छ ।
नेकपा एमालेकी जिल्ला सदस्य समेत रहेकी भण्डारीलाई एमालेले सर्वसम्वत चयन गरेको हो । भण्डारी राजनितिकर्मी संगै होटल ब्यवसायी हुन् । त्यसैगरी नेकपा माओबादी केन्द्रले पनि जिल्ला सदस्य मल्मकी ललिता थापालाई अगाडी सारेको छ । थापा पनि होटल ब्यवसायी हुन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले हरिचौरकी सुनमाया ढकाललाई अगाडी सारेको छ । ढकाल पृथ्वी मावि हरिचौरकी शिक्षिका हुन् ।
राजनितिमा महिलाहरु कम क्रियासिल भएकै कारण उनिहरु सर्वसम्वत चयन भएका छन् ।
बाम तालमेलको पनि चर्चा चलेको छ । भागबण्डाका आधारमा यिनै तिन मध्ये एक उमेद्वार बन्ने पक्का छ । एमाले र जनमोर्चा बिच तालमेल गरेर अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बुझिएको छ । माओबादी केन्द्र संग भने कुनै प्रकारको सहमति नभएको बताईएको छ ।
तत्कालीन अखण्ड नेपाल पार्टीका कावा अध्यक्ष महत सहित माले कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश !